Kuwani waa musings ku suxuunta fiican degaanka aan ku riyaaqay, intii aan joogaan Austria. Waxaan ku jiray meesha xagaaga 2016 waayo, internship 4 bilood at a NGO degaanka yar oo cabbirkooda. waayo-aragnimo internship waxa uu ahaa sidaas u weyn oo, oo aan u helay in ay la kulmaan shaqsiyaadka dhallinyarada tayo leh, kii aan hayn in la kor u taabto ilaa hadda, oo aan awoodin in ay hirgeliyaan xirfadaha baray in aan internship in kaalin aan hadda ka jirta Singapore.
Asalka cuntooyinkan ayaa ah mid si weyn looga doodi karo - qaar baa ku doodaya in tani ay ka timid gobolka Swabian, iyo qaar kale sheegayaan in rikoorka ugu da'da weyn ee Kasespatzle taariikhaysan dib ugu buugga gacanta-qoraal ee qarnigii hore 17-. Magaca imid yaabaa in ay ka dhaqdhaqaaqa dhex cajiimi jireen doughs galay gabal qaniinyada yimaa-a, laakiin ma jirto caddayn taariikhiga ah waxaa ka mid ah. In times casriga ah, saxan this lagu yaqaan qayb ka mid ah cuntada raaxada ka dib markii a tug dheer hawada tegayo Alpine. Haddii kale, waxaad ka heli kartaa inta badan makhaayadaha maxalliga ah. Ay u adeegaan ee qaybo badan oo dalalka ku hadla-German, Vorarlberg Kasespatzle ah (Vorarlberg waxa ku sugan West of Austria) waa heer sare ah loo jecel yahay ee Austria. baastada waxaa laga sameeyey bur, sida ku xusan asal magaca, dhammeeyey galay qaniinyada yar tiimbadeen cheese dubay. texture waa run ahaantii jannada, barafka afka. basasha la shiilay iyo basasha guga ku dar dhir udgoon inay this samada saxan shiidan (run ahaantii ay sameeyaan shaqo weyn!).
back to Austria ii qaad - Waxaan mar walba u Yeedhaan mar kasta oo aan helin in warbaahinta Candy Empire (waarido keentay for confectioneries caalamiga Singapore ah, tani waa meesha kaliya ee aan ka iibsan kartaa alaabta hab). Sidaas oo ay tahay aasaaska ganacsi qoys dhaqanka Austria oo la asaasay qarnigii 19aad. Hubaysan tayada adag, maaddooyinka si taxaddar leh loo xushay, iyo baakado midab leh oo midab leh, brand this waxaa caan isagoo xusuus saxiixa ee Austria ah. Mannerschnitten (baakadda ah oo canjeero shukulaatada hazelnut) waa isku day; ma sidaas macaan toona si Faylasha, taasi marnaba u muuqataa in ay ku guuldareysato inay soo jiito aan ilig macaan. hazelnut The mar kasta i qaada si cimrigaygu cajiib ah in Vienna dib. Isla markiiba waxaan had iyo jeer isku dayaa canjeelada shukulaatada Manner waqtiga cunnada ama mar kasta oo aan damco. Aan ku fikiray in hab waxaa laga heli karaa dukaamada ee Central Europe oo keliya. Si kastaba ha ahaatee, Waxaan cad u dulmiya sidii Mannar ahay macmacaanka waxaa laga heli karaa in Singapore aad.
Schlutzkrapfen (baastada nus-bisha ah oo laga buuxiyey farmaajo ricotta iyo isbinaajka)
Waxaan la kulmay saxankan markii aan sahaminayay Innsbruck ee Galbeedka Austria kaas oo caan ku ah taariikhi ah, Saqafka Golden. Waxaan hopped galay cafe ah oo sugayay wax khudrada. Akhrinta kor menu, baastada la buuxinta cuntada ka dhawaajisay fiican ii, sidaas darteed waxaan u amartay. Waxaan ka fekerayay ee baastada dheer khudaar aad jarjartey, laakiin waxa ay ka leexatay in la simay baasto wax u gudaha oo waxaa lagu sharraxay saydhaa ah cheese oo la jarjarey basasha guga. subagga dhalaalay shaqeeyay ton si saxan this sibiibix ah afkayga. More muhiimsan, Weli waxaan la xusuusto oo adeegto ka soo baxaya miiskayga oo weydiinaya haddii taasu wanaagsan. Waxaan iyada u sheegay in uu ahaa sidaas dhadhan fiican leh - Waxaan si taabtay by iyada oo daryeel ku qancidda macaamiisha iyo qalbigayga waxaa ka buuxsamay diirimaad. Asal ahaan ka South Tirol ah (hadda qayb ka mid ah Italy), waxaa prevalently sidoo cuntada caadiga ah ee deriska ah Tirol. Xaddi weyn ee shaqada waa qayb qaataan si ay uga dhigi inkastoo xaqiiqda ah in waxa ay u muuqataa si fudud in la sameeyo.
Mid ka mid ah "waa in la cuno" Vienna, Austria. Waa qaas ahaan si dhab ah degaanka abuuray markii dhammaadka muddada Habsburg ah. Ma ogtahay in ay jiraan dagaal aan macquul ahayn, laakiin muhiim ah ka dambeeya cake this? Labada Kooxda cajiin Viennese, Demel iyo Sacher lahaa in a "macaan" state dagaal muddo dheer in xitaa keentay in kiiska maxkamadda doqonimo; cidda isugu yeedhaan ah "asalka Sachertorte"? Intee in le'eg oo khudaar waa in la isticmaalaa si kaamil ku hawlan? Waa maxay heerkulka ku habboon shukulaatada dareere? dhab ah, waxay ku dooday waxan oo dhan ayaa maxkamada gobolka, aan fasalka lagu karsado ama mid ka mid ah nooca. Dhamaadka, Sacher ku guuleysatay dagaalkii oo hadda isu faantaa on "ka ah torte asalka Sacher." Taariikhda sokow, Waxaan shakhsi ahaan ka jeeclaadeen Demel ka mid ah sida ay u dheeraad ah oo macaan iyo qalafsaneyn yahay kii Sacher waa. Waa maxay farqiga u dhexeeya Sacher "torte Sacher" iyo dhigiisa Demel ah? hore ee helay binta wax yar ka sareeya oo layers cake dheeraad ah oo kor u kacay khudaar gudaha ku hawlan. Arintaan waa yara jaban oo badan creamier.
Wakiil ka socda cosmopolitanism Vienna ee. In Vienna, waxaa jira xamuulka ee suuqyada lagu gadayay 'maaddooyinka "qalaad" ka imaanaya ku dhowaad dunida oo dhan. Waxaad ka heli kartaa cunnooyin iyo waxyaabo ka kooban ka yimid Ruushka, Turkey, Japan, Hindiya, iyo in ka badan. Asal ahaan ka soo Bariga Dhexe, tani waa mid ka mid ah cuntada fursadaha farta Viennese helay ee suuqyada caalamiga ah. Laga sameeyey noocay la shiiday, kubbadaha Falafel la cuni karin qaab Falafel wuxuuuna ama raacidda kibis fidsanaan. Si kastaba ha ahaatee, Falafel yimaado la farabadan of cut khudaarta iyo yoogadka gudaha duubo sareeen oo dhan ama roodhida balaadhan. In a caadiga ah vegan kaamil ah, tani waa saxanka saaxiibaday loo isticmaalaa in ay ii soo bandhigi sida ay ogaa in aan kaliya ku koobnayn ayaa doorashooyin cuntada sida khudrada ah. Waxaa tan ka mid ah Falafel oo xero oo dhan Vienna, laakiin aan jeclaa taagan Falafel waa mid ka mid ah in Brunnenmarkt. Loo yaqaan suuq waalan raqiis ah halkaas oo qof kasta ka heli kartaa soo diyaariyeen ballaaran ee maaddooyinka at qiimaha cajiib hoose, suuqa this waxay bixisaa qayb ka mid ah lagu duubo Falafel in sidoo kale kharash ka yar USD 1 ama si, taasoo ka dhigeysa inay ugu raqiisan tahay magaalada. Baahnayn in la sheego, dhadhanka duubku waa sida ugu wanaagsan yahay midka suuqyada kale ee Viennese.
My macmacaan Austria jecel! Roodhida subagga iyo laba xabbadood oo tufaax ah iyo farabadan sabiib ah ayaa sixir ka shaqeeya waxayna i dareensiiyaan jannada. Halyeeyga The waxa ay leedahay in Austria keeno Baklava ah macmacaan macaan ee Bariga Dhexe. Baklava laga sameeyey oo cajiin qalafsaneyn iyo sonkorta iyo sharoobada, taasoo la micno ah waxaa la taago cajiin ee sharoobada. In dhinaca ka sii Maalmihii, Apfelstrudel waa version ah oo ku kooban ee Baklava- tani waa tusaale wanaagsan oo suxuunta Austria, sida badan oo iyaga ka mid ah ay ula socdaan kartaa wax raad ah oo ka socda gobolka boqortooyadii hore ee Austria oo ay la keeno. Waxaa jira cuntada sida Apfelstrudel xad-dhaaf ah online, iyo qaar ka mid ah qorayaasha cuntooyinka ayaa deeqsi ku filan la wadaag qoyskooda cuntada adduunka. Si kastaba ha ahaatee, qaanuunka caalamiga ah waa in ay cajiinka waa in si khafiif ah in kuugga cajiin ka akhriyi kartaa wargeys dhex.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit ah la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F6-must-try-austrian-dishes%2F%3Flang%3Dso - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)